Popular Academy | Popular
ဆုရွေးချယ်ရေးအဖွဲ့က အကယ်ဒမီကို ဒီနှစ်မှာ အရင်တုန်းက မူ အဟောင်းအတိုင်း ရွေးချယ်ခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်။ အဲဒီတော့ ဒီနှစ်ထဲမှာပဲ အကယ်ဒမီနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းကို...
၂ဝ၁၇ ခုနှစ် မြန်မာ့ရုပ်ရှင်ထူးချွန်ဆုချီးမြှင့်ပွဲတွင် အကောင်းဆုံး တေး ဂီတဆုရရှိခဲ့သည့် စန္ဒရားဦးတင်ဝင်းလှိုင်အနေဖြင့် ကျေးဇူးတင်စကားပြော ကြားခဲ့ရာတွင် ထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့သောစကားများနှင့် ပတ်သက်ပြီး...
ပိုပြီးထည်ဝါကြီးမြတ်ချင်တော့နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်အောင် ဆန်းစုကြည်ကိုယ်တိုင်ဘဘကို တစ်သက်တာဆု တက်ရောက်ချီးမြှင့် ခဲ့တယ်။ ဘဘရဲ့ စကားလုံးတိုင်းဟာ အသက်ဝင်လှပါတယ်။အားလုံးစီး မျောနေချိန်၊ ဘဘစင်ပေါ်မှပြန်အ ထွက် ဒီလိုညမျိုးစာသားဟာကွက်တိ ရင်ကိုထိမှန်စေခဲ့တယ်။အားလုံး မတ်တတ်ရပ်လေးစားသမှု ပြုကြတယ်။ရင်ထဲဆို့ပြီး…
အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် ကြိုးစားရ တော့မှာ ပေါ့။ အရင် ကလည်း ကြိုးစားပါ တယ်။ အခုတော့ ပိုပြီးတာဝန်ကြီး တယ်လို့သုံးသပ် တာပေါ့။ ဒီနှစ်ကတော့ လိုချင် တာတွေ…
'နေ့စဉ်ရှုတင်တွေ လည်ပတ်နေရင်းနဲ့ သုတို့လောကထဲမှာ လို အပ်တဲ့နေရာတွေအများကြီးရှိတယ်လို့ သုမြင်နေရတယ်။ ဥပမာ စက်အဖွဲ့တွေပဲဖြစ်ဖြစ် သူတို့ ပင်ပင်ပန်းပန်းလုပ်နေရတယ်။ ဇာတ်ပို့ဇာတ်ရံ ထဲမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘဝအလွန်ကြမ်းတဲ့ ...
၂ဝ၁၇ ခုနှစ်အတွက် မြန်မာ့ရုပ် ရှင်ထူးချွန်ဆုရှင်များအား ဂုဏ်ပြုပွဲ အခမ်းအနားကို မတ်လ ၂၄ ရက်နေ့ ညနေ ၆နာရီက Lotte Hotel မှာ ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။...
အခုနှစ်အကယ်ဒမီမှာတော့ အထူးဆုအနေနဲ့ပေးဖို့အသံတွေ ထွက်ခဲ့ပေမယ့်လည်း တကယ်တမ်းမှာတော့ ပေးသွား ခဲ့ခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူး။ အထူးဆုအနေနဲ့ အသံထွက်တဲ့ အချိန်မှာတော့...
နှစ်စဉ်ကျင်းပ ပြုလုပ်နေကျ မြန်မာ့ရုပ်ရှင်ထူးချွန်ဆုချီးမြှင့်ပေးအပ်ပွဲကြီးအတွက်လည်း ရင်ခုန်သံတွေ ပြင်းထန်နေကြသလို အကယ်ဒမီဆုပေးပွဲ လျှောက်လမ်းမှာ တက်ရောက် လာကြတဲ့ မင်းသားမင်းသမီးများရဲ့ အကယ်ဒမီဖက်ရှင်နဲ့ အကယ်ဒမီ မိတ်ကပ်ပြင်ဆင်မှုတွေကိုလည်း...
အကယ်ဒမီညတုန်းကဆိုရင် မြင့်မြတ် အကယ်ဒမီရသွားလို့ တစ်လမ်းလုံး ဟေးဆိုတဲ့ အသံတွေနဲ့ ပြည့်နှက်နေ ခဲ့တာ။ အဲဒီတုန်းကဆိုရင် သြော် ငါတို့ ရွေးပေးလိုက်တာ မှန်သွားပြီဆိုပြီးတော့ ပီတိဖြစ်နေရသေးတယ်။ နောက်…
အကယ်ဒမီရွှေကြယ်ကို ရုပ်ရှင်လောကသားတွေအတွက် လိုအပ်တဲ့နေရာမှာ လှူဒါန်းသွားမယ့် ပိုင်ဖြိုးသု
သုက ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်တော်တယ်ဆိုတာထက် ကံကောင်းတာလဲပါတယ်။ အကယ်ဒမီဆိုတာ အရမ်းနတ်ကြီးတော့ ကံ၊ ဥာဏ်၊ ၀ီရိယ ၃ ခုလုံးစုံတဲ့အချိန်မှာ ရတာပေါ့။ အခုအချိန်မှာ သုကံကောင်း တာကြောင့် ရတာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်…
ပရိသတ်တွေရစေချင်တဲ့ ဇာတ်ကားနဲ့ အကယ်ဒမီဆုရသွားတဲ့အတွက် ပရိသတ်တွေအနေနဲ့ အရမ်းစိတ်ကျေနပ်မှုရသွားမယ်လို့ထင်ပါတယ် ပြောလာတဲ့ အကယ်ဒမီအိန္ဒြာကျော်ဇင်
အကယ်ဒမီ ရတာမရတာထက် သိန်း၁သောင်းတန် လက်ဝတ်ရတနာတွေကို ပိုပြီးစိတ်ပူနေရတယ်ဆိုတဲ့ ပြေတီဦးနဲ့အိန္ဒြာကျော်ဇင်တို့စုံတွဲ
မေသန်းနု ရဲ့ အကယ်ဒမီ ရင်ခုန်သံ
ထာဝရ အမေ ဇာတ်ကားနဲ့ အကယ်ဒမီ တစ်ကြိုပြေး နေတဲ့ အကယ်ဒမီ မေသန်းနု ရဲ့ အကယ်ဒမီနေ့ ရင်ခုန်သံ စကား
အကယ်ဒမီအတွက် ရင်ခုန်ဖို့ ကြောက်နေတဲ့အကြောင်း ပြောပြတဲ့ ပိုင်ဖြိုးသု
မအေးသောင်း နဲ့ ဖူးစုံ တို့ရဲ့ အကယ်ဒမီ စကားသံ
မြင့်မြတ် နဲ့ နေတိုး တို့ကို အကယ်ဒမီ ရစေချင်ပါတယ် ဆိုတဲ့မအေးသောင်း နဲ့ ဖူးစုံ တို့ရဲ့ အကယ်ဒမီ ဆုတောင်း
နိုင်ငံတော် အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းဆုကြည်၏မိန့်ခွန်း
၂၀၁၇ ခုနှစ် မြန်မာ့ရုပ်ရှင်ထူးချွန်ဆုပေးပွဲ အခမ်းအနားတွင် မိန့်ခွန်းပြောကြားနေသော နိုင်ငံတော် အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် (ရုပ်သံ)
စိုင်းစိုင်းရဲ့ အကယ်ဒမီ ပွဲတက်ဖက်ရှင်ကတော့…
ဒီနှစ်မှာဒီလိုဝတ်စုံက တစ်စုံပဲရှိပါမယ် ဆိုတဲ့ စံရတီမိုးမြင့်
အကောင်းဆုံးအမျိုးသားဇာတ်ဆောင်ဆုရှင် နေတိုးရဲ့ အကယ်ဒမီစကား-
အိန္ဒြာကျော်ဇင်အတွက် တူမဖြစ်သူ မေးတိုးခိုင်ရဲ့ဝမ်းသာဂုဏ်ယူစကား
၂၀၁၇ ခုနှစ်အတွက် အကောင်းဆုံးအမျိုးသမီးဇာတ်ဆောင်ဆုရ အကယ်ဒမီ အိန္ဒြာကျော်ဇင်အတွက် တူမဖြစ်သူ မေတိုးခိုင်ရဲ့ဝမ်းသာဂုဏ်ယူစကား
၂၀၁၇ ခုနှစ်အတွက် အကောင်းဆုံးအမျိုးသမီးဇာတ်ဆောင်ဆုရ အကယ်ဒမီ အိန္ဒြာကျော်ဇင်အတွက် အစ်မဖြစ် အိကျော်ဇင် ရဲ့ဝမ်းသာဂုဏ်ယူစကား
အမျိုးသား ဇာတ်ဆောင်ဆု- " နေတိုး" အမျိုးသမီး ဇာတ်ဆောင်ဆု - " အိန္ဒြာကျော်ဇင်" အမျိုးသမီး ဇာတ်ပို့ဆု- "ပိုင်ဖြိုးသု" အမျိုးသား ဇာတ်ပို့ဆု -"မြင့်မြတ်" ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားဆု…
အိမ့်ချစ်က တကယ်တမ်းတော့ အကယ်ဒမီဆုပေးပွဲကြီးရဲ့ ပရိသတ်ပါ။ နှစ်တိုင်း ဘယ်တော့မှ မလွတ်ဘူး။ ခရီးသွားနေရင်တောင် အွန်လိုင်းက နေကြည့်တယ်။ အကယ်ဒမီ ဆုပေးပွဲကြီး ကျင်းပတဲ့နေ့ဆိုရင်...
Make -up Special Effect ပညာရပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ ပတ်သက် ပြီးတော့ အသိအမှတ်ပြုတဲ့ အကယ် ဒမီဆုဆိုတာမျိုး မျှော်လင့်မိတယ်လို့ ကိုအောင်ကျော်ထွန်းက ပြောပါတယ်...
ဘဘဗိုလ်ကလေးတင့်အောင်ကို တစ်သက်တာဆုချီးမြှင့်ပါမယ်။ အဲဒီအ တွက်ကြောင့်မို့လို့ ဘဘရေးခဲ့တဲ့ သီချင်းတွေရယ်၊ နောက်ပြီးဘဘရဲ့ ညီအရင်း ဖြစ်တဲ့ ဒယ်ဒီဂီတလုလင်မောင်ကိုကိုရဲ့ အောင်မြင်ကျော်ကြားခဲ့တဲ့....
အကယ်ဒမီဆန်ခါတင် စာရင်းထဲမှာ "သရာစောထိ"က ပါ နေလေတော့ "သရာစောထိ"ဇာတ်ကား ကနေ ဘယ်သူတွေကို အကယ်ဒမီရစေ ချင်လဲလို့ ဇာဂနာကိုမေးဖြစ်တဲ့အခါ ...
ကျွန်တော် ဒါရိုက်တာ တစ်ယောက်အနေနဲ့ အကောင်းဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့တယ်။ ဇာတ်ကားတစ်ခုမှာ လိုအပ်တဲ့ပညာရပ်တွေ အရုပ်တွေ၊ အသံတွေ၊ မြူးဇစ်တွေ ဆက်တင် တွေ၊ အဝတ်စားတွေ၊ ဇာတ်ညွှန်း အချိတ်အဆက်တွေ…
အခုတစ်ပတ်မှာတော့ မကြာခင်ကျင်းပတော့မယ့် အကယ်ဒမီပေးပွဲကြီး လည်း နီးလာပြီဖြစ်လို့ ရုပ်ရှင်ချစ်ပရိသတ်တွေဆီက သူတို့ရစေချင်တဲ့ အနုပညာရှင်တွေအကြောင်း 'ပရိသတ်ပေးတဲ့အကယ်ဒမီ'ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်နဲ့ မေးမြန်းဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
အကယ်ဒမီဆုပေးပွဲမှာ အစဉ်အ လာအရ ပရိသတ်များလည်း မငြီး ငွေ့သွားအောင်ဆိုပြီး တေးသီချင်း လေးတွေကို ထည့်သွင်းဖျော်ဖြေလေ့ ရှိပါတယ်။ အများအားဖြင့်လည်း ရုပ် ရှင်ဇာတ်ဝင်တေးသီချင်းများကို...
ကျွန်တော်ကတော့ အဝေးကြီးပါ။ ကျွန်တော်က အကယ်ဒမီမှန်းရင် ဆိုက် ကားသမားက Land Cruiser ကြီးတက်စီးသလိုမျိုးဖြစ်နေမှာပေါ့။ အဝေး ကြီးပဲ။ ဒါပေမဲ့ ...
၂ဝ၁၇ ခုနှစ်အတွက် မြန်မာ့ရုပ်ရှင်ထူးချွန်ဆုချီးမြှင့်ပေးအပ်ပွဲကို မတ်လ ၂၃ ရက်နေ့ ညနေ ၆ နာရီ က စတင်ပြီးတော့ မင်းဓမ္မလမ်းရှိ MEP ခန်းမမှာ ကျင်းပပြုလုပ်မှာ…
အကောင်းဆုံးတွေထဲက အ ကောင်းဆုံးကို သတ်မှတ်ထားတဲ့ စည်းကမ်းချက်တွေအတိုင်း ရွေး ချယ်နေပါတယ်။ အစ်မကတော့ သရုပ်ဆောင်နဲ့ ဇာတ်ကားဆုတွေ အ တွက် အကဲဖြတ်ပေးပါတယ်။ ကောင်းတဲ့လူတွေယှဉ်ပြိုင်ကြရတာ က…
ဒုတိယအကြိမ် ဇာတ်ကား ၁၁ ကားကို ကြည့်ရှုကြသည်။ အမှတ်ပေး စရာတွေ တွေ့ရှိလာသည်။ တတိယ အကြိမ်၊ စတုတ္တအကြိမ်ထိ ကြည့်ပါ သည်။ ဇာတ်ကားအကြိမ် ၉ဝ…
အခုနှစ် အကယ်ဒမီဆုပေးပွဲကြီးကို မတ်လ ၂၃ ရက်နေ့မှာ ကျင်းပတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ အကယ်ဒမီဆုအပြင် ပွဲကိုတက်ရောက်လာတဲ့ အနုပညာရှင်များရဲ့ ပွဲတက်ဖက်ရှင်တွေကို ပရိသတ်တွေက စိတ်ဝင်တစားနဲ့ စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း ဒီနှစ်အကယ်ဒမီပွဲတက်ဝတ်စုံတွေအတွက်…
နောက်နှစ် ကျင်းပပြုလုပ်မယ့် ၂ဝ၁၈ ခုနှစ်အကယ်ဒမီအတွက်ဆိုရင် ခုနာမည်ကြီးနေတဲ့ လူငယ်ဒါရိုက်တာ ခရစ် စတီးနားခီ၊ လူငယ်မင်းသားဇာဏ်ခီတို့ရဲ့ ဥပါယ်တံမျဉ်ရုပ်ရှင်နဲ့ မုဒြာရဲ့ခေါ်သံရုပ်ရှင် ဇာတ်ကားများဟာ အကယ်ဒမီဆုများစွာ...
မဆင့်အကယ်ဒမီနဲ့အလှမ်းဝေတာကြာပြီဆိုတော့ဒီနှစ် အကယ်ဒမီရခဲ့ရင်အနုပညာမှာပိုပြီးတော့နုပျိုသွားမှာပေါ့ လို့ဖွင့်ဟလိုက်တဲ့မေသန်းနု
ရွှေသမီး ဘာကြောင့် အကယ်ဒမီပေးပွဲ မတက်တာလဲ . . .
အားလုံးကိုတော့ရစေချင်တယ်။ ဒီနှစ်ကတော့ မအူဝဲ၊ မအေးမြတ်သူ၊ မစိုးပြည့်သဇင်တို့ရမယ်လို့တော့ ကြားပါတယ်။ ဘယ်သူပဲရရပါ၊ အားလုံးအတွက် ရင်ခုန်ပေးနေပါတယ်...
မတ်လ ၂၃ ရက်နေ့ နီးလာလေ၊ အကယ်ဒမီရင်ခုန်သံမြန်လာလေပဲ။ ထင်ကြေးအရှိန်က ပိုများလာ လေပဲ။ အထင်က ထင်ရုံပဲ၊ အမြင်က သာ ပိုလို့ သေချာတာပါ။…
၂ဝ၁၇ ခုနှစ် အကယ်ဒမီဆုပေးပွဲကြီးကိုတော့ မတ်လ ၂၃ ရက်နေ့၊ မင်းဓမ္မလမ်းမှာရှိတဲ့Myanmar Event Park (MEP)မှာ ကျင်းပပြု လုပ်တော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အရင်နှစ်တွေကဆိုရင် ရွှေကြိုကို…
၂ဝ၁၇ ခုနှစ်မြန်မာ့ရုပ်ရှင် ထူး ချွန်ဆု (အကယ်ဒမီဆု)ချီးမြှင့်ပွဲ အခမ်းအနားကို ၂ဝ၁၈ခုနှစ်၊ မတ်လ ၂၃ ရက်နေ့တွင်မင်းဓမ္မလမ်းရှိ Myanmar EventPark ၌ ကျင်းပမည်ဖြစ်သည်။ အကယ်ဒမီ…
၂ဝ၁၇ ခုနှစ်တွက် အကယ်ဒမီ ထူးချွန်ဆုချီးမြှင့်ပွဲ မတ်လ ၂၃ ရက် နေ့ကျရင် ကျင်းပတော့မှာမို့ ရုပ်ရှင် ချစ်ပရိသတ်များကော အနုပညာရှင် တိုင်းပါ ရင်ခုန်ကြရတော့မည်။ ကြိမ်း…
ဇာတ်ကားရိုက်ကူးမှုနည်းတဲ့အတွက် ပရိသတ်တွေက သူမဇာတ်ကားကို မကြည့်ဖြစ်ပေမယ့်လည်း ပရိသတ်တွေနဲ့ အမြဲတမ်း ထိတွေ့မှုရှိနေပုံကိုလည်း သင်ဇာဝင့်ကျော်က . . .
တစ်ဖန် မနှစ်ကနှင့်မတူ တစ်မူ ထူးခြားတာလေးရှိပါသည်။ဒါက တစ်သက်တာဆု ထူးချွန်မှုဆုပါ။ စွယ်စုံပညာရှင် သက်ကြီးဝါကြီး တစ်ဦးကို ချီးမြှင့်ပါမည်။ ခမ်းနားစွာကျင်းပ၍ ချီးမြှင့်သည့်ဂုဏ်ပြုဆု၊ ဒါကနိုင်ငံတကာမှာလည်း ချီးမြှင့်သည့် ဂုဏ်ထူးဆုပါ။…
အကယ်ဒမီ ခိုင်သင်းကြည်က ဒီနှစ်အကယ်ဒမီပွဲ တက်ရောက်ဖို့ အတွက် အားလုံး ပြင်ဆင်ပြီးခါမှ သူ့အဖေကျန်းမာရေး အတွက် ဘန်ကောက်ကို သွားခဲ့ရတာကြောင့် ......
၂ဝ၁၆ခုနှစ် အတွက် မြန်မာ့ရုပ်ရှင်ထူး ချွန်ဆုပေးပွဲ မှာ ရုပ်ရှင်အထူးဆုကို "မနော မြေမှ ကျောက်စိမ်းကမ္ဘာ" ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားနဲ့ မိုးမြန်မာမီဒီယာ ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ရေးက
၂ဝ၁၆ ခုနှစ် အကယ်ဒမီဆု ချီးမြှင့်ပေးပွဲမှာ အကောင်းဆုံး သရုပ်ဆောင် ဇာတ်ပို့ဆုကို ရရှိခဲ့တဲ့ သရုပ်ဆောင် လူမင်းက အခုလို ဇာတ်ပို့ အနေ နဲ့ဆုရရှိမယ် ဆိုတာကို…
အကယ်ဒမီ ဆုပေးပွဲတွေ ပြီး သွားတိုင်း ဆုမပေးဘဲ ကျန်ရစ်ခဲ့တဲ့ ဆုတွေကြောင့် နှစ်စဉ် ဂယက်တွေ ရှိနေခဲ့သလို အခုနှစ်မှာလည်း အကယ်ဒမီ အပြီး ဂယက်တွေ.........
နှစ်စဉ် အကယ်ဒမီ ပဲတက်တဲ့ အခါ အနုပညာရှင် တို့ရဲ့ လက်ဝတ်လက်စား ရတနာတွေ ပျောက်ရှမှုတွေ ရှိတဲ့ သလို အခုနှစ် အကယ်ဒမီပေးပွဲ မှာ လည်း.
၂ဝ၁၄ ခုနှစ် အတွက်အကယ်ဒမီ ဆုပေးပွဲမှာ "မာယာပရောဂျက်" ဆိုတဲ့ ရုပ်ရှင် ဇာတ်ကားနဲ့ အကောင်းဆုံး ရုပ်ရှင် အသံဆုကို ရရှိထားခဲ့ဖူးတဲ့ ......
အနုပညာ လျှောက်လှမ်းမှု ခရီး သက်တမ်းအားဖြင့် လေးဆယ်ကျော် ရှိလာခဲ့ပြီးနောက် ၂ဝ၁၇ ခုနှစ် မတ် ၁၈ ရက်နေ့မှာ ဒါရိုက်တာ ညွှန့်မြန်မာ ညီညီအောင် က…
ဓီရာမိုရ်ဆိုတာ ဂီတလောကမှာ မသိသူ မရှိလောက်အောင် ထူးချွန်လှတဲ့ အနုပညာ သမားတစ်ဦးပါ။ သူနဲ့ အကယ်ဒမီ ပေးပွဲမတိုင်ခင် အင်တာဗျူး ဖြစ်တုန်းက ....
၂ဝ၁၆ ခုနှစ် အတွက် အကယ်ဒမီဆုပေးပွဲ အပြီး နောက်တစ်ရက်ဖြစ်တဲ့ မတ်လ ၁၉ ရက် နေ့မှာတော့ မြန်မာနိုင်ငံ ရုပ်ရှင် အစည်း အရုံးက ဦးစီးပြီး…
အကယ်ဒမီ ကို ဒီနှစ်မှာတော့ နိုင်ငံတော် အဆင့်ပွဲလမ်းသဘင်တွေ မှသာ ကျင်းပပြုလုပ်ခွင့် ရလေ့ရှိတဲ့ ရန်ကုန်မြို့ မြေနီကုန်း ရှိ ပြည်သူ့ ရင်ပြင် မှာ မတ်လ…
အကယ်ဒမီကို ကျွန်တော် ခံယူထားတာကတော့ ဒီလိုလူသိရှင်ကြား၊ တိုင်းပြည်အရှေ့မှာ တကယ့်ပညာရှင်တွေအကြီးအကဲတွေရဲ့ရှေ့မှာ ထူးချွန်တယ်ဆိုတာကို.....
မြန်မာ့ရုပ်ရှင် လောကသားတွေရဲ့ ရင်ခုန် စိတ်လှုပ်ရှားစရာ အကောင်းဆုံးဖြစ်တဲ့ ၂၀၁၆ခုနှစ် အကယ်ဒမီ ထူးချွန်ဆု ချီးမြှင့်ပွဲကတော့ ကြီးကျယ် ခမ်းနား စွာဖြင့် ပြီးစီးခြဲ့ပီ ဖြစ်ပါတယ်။
အကယ်ဒမီ ရွှေကိန္နရီ ရွှေစင်ရုပ်ထု ကိုတော့ ၁၉၅၂ ခုနှစ်ကတည်းက ပီအောထွန်းရင် နဲ့ သားများတံဆိပ် လုပ်ငန်းက နေပြီး ပြု လုပ်ပေး ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။…
အခမ်းအနားအစီအစဉ်ကို အကယ်ဒမီ ဓီရာမိုရ် ဦးစီးသော ဂီတကဗျာ ORCHESTRA တီးဝိုင်း နှင့်အတူ ယဉ်ကျေးမှု တက္ကသိုလ်မောင်၊ မယ်တို့က ခေတ်ဟောင်း ရုပ်ရှင်ဇာတ်ဝင်ခန်း တေးသရုပ်ဖော်ဖျော်ဖြေတင်ဆက်ခဲ့ပြီး နိုင်ငံတော်…
တအားကို ပျော်ပါတယ်။ သက်မွန်ကိုချစ်တဲ့ ပရိသတ်တွေ သက်မွန်ကိုရစေချင်တဲ့ သူတွေရဲ့ ဆန္ဒပြည့်ဝသွားတဲ့အတွက် အတိုင်း မသိပျော်ပါတယ်။ အဲဒီအတွက် အကဲဖြတ်အတတ်ပညာရှင်များ အားလုံး လူကြီးမင်းများ အားလုံးကို ......
ဇာတ်ကားဆု - အုတ်ကြားမြက်ပေါက် (ရွှေစင်ဦး ထုတ်လုပ်ရေး) ဒါရိုက်တာဆု - ညွန့်မြန်မာ ညီညီအောင် (အုတ်ကြားမြက်ပေါက်) အမျိုးသားဇာတ်ဆောင်ဆု- ထွန်းထွန်း (အုတ်ကြားမြက်ပေါက်) အမျိုးသမီးဇာတ်ဆောင်ဆ…
အကယ်ဒမီ အိန္ဒြာကျော်ဇင် ရဲ့ အကယ်ဒမီပွဲတက်ဖက်ရှင်များ
၂၀၁၁ခုနှစ် မှ ၂၀၁၆ခုနှစ်အထိ
ပရိသတ်တွေအနေနဲ့လည်း အကယ်ဒမီပေးပွဲကို စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုကြရခြင်းက အကယ်ဒမီဆုရရှိမယ့် သရုပ်ဆောင်တွေနဲ့ အတူ အကယ်ဒမီကိုရင်ခုန်ပေးကြဖို့ရယ် အကယ်ဒမီပွဲကို တက်ရောက်လာကြမယ့် အနုပညာရှင်တွေရဲ့ ဖက်ရှင်ဒီဇိုင်း တွေကို ကြည့်ရှုဖို့အတွက် လည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနှစ်…
" မြန်မာ့ရုပ်ရှင် နှစ်၁ဝဝပြည့်ဆီသို့ " ဆိုသည့်အတိုင်း အကယ်ဒမီပွဲအခမ်းအနားနေ့ အပြင်အဆင် များကို ထူးခြားဆန်းသစ်စွာဖြင့် ပြုလုပ်သွားမည်ဟု သိရသည်။ အဆိုပါ အကယ်ဒမီပေးပွဲ၏ စတိတ်အပြင်အဆင်အပိုင်းအပါအဝင် အစီအစဉ်တစ်ရပ်ကို…
၂ဝ၁၆ ခုနှစ်အတွက် အကောင်းဆုံးမြန်မာ့ရုပ်ရှင်အနုပညာရှင်၊ အတတ်ပညာရှင်နဲ့ ဇာတ်ကားတွေကို အကယ်ဒမီဆုပေးအပ်ချီးမြှင့်မယ့် မြန်မာ့ရုပ်ရှင်အကယ်ဒမီထူးချွန်ဆု ပေးအပ်ပွဲကြီးကို ........
အဆိုတော်၊ သရုပ်ဆောင် JZ ဒေါင်းလွမ်းရိုက်ကူးတဲ့ "မနောမြေမှ ကျောက်စိမ်းကမ္ဘာ" ဇာတ်ကားက အခုနှစ်အကယ်ဒမီဆန်ခါတင် စာရင်းမှာပါဝင်နေပါတယ်။ ဒီနှစ်အကယ်ဒမီပေးပွဲ ကိုလည်း ......
အကယ်ဒမီလွင်မိုးက အခုနှစ် အကယ်ဒမီပေးပွဲကိုတက်ရောက်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အကယ်ဒမီဆုကို အခု နောက်ပိုင်းမှာ မြန်မာနိုင်ငံရုပ်ရှင်အစည်းအရုံး ကနေပြီး ဦးစီး ပေးအပ် လာရာမှာ .......
ဒီနှစ်အကယ်ဒမီ ဆုပေးပွဲမှာ အကယ်ဒမီမို့မို့မြင့်အောင်က ဆန်းထွဋ်နဲ့အတူ အစီအစဉ်တင်ဆက်သူအဖြစ် ပါဝင်ဆောင်ရွက်မှာ ဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ အကယ်ဒမီပွဲတက်ဝတ်စုံကိုတော့ .............
မတ်လ ၁၈ ရက်နေ့မှာတော့ မြန်မာ့ရုပ်ရှင်ရဲ့ ၆၄ကြိမ်မြောက် အကယ်ဒမီ ထူးချွန်ဆုပေးပွဲကြီးကို ပြည်သူ့ရင်ပြင်မှာ ကျင်းပတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အကယ်ဒမီအပေါ်မှာ ..........
ခိုင်သင်းကြည် ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ "ငါ့အကယ်ဒမီ" ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားက မတ်လ၁၈ရက်နေ့မှာ ကျင်းပမယ့် အကယ်ဒမီထူးချွန်ဆုပေးပွဲမတိုင်မီ ရုံတင်ပြသ တော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အကယ်ဒမီပွဲကျင်း .........
အကယ်ဒမီပွဲကြီး နီးလာပြီဆိုတော့ ရုပ်ရှင် လောကသားတွေ ရင်ထဲမှာ ထူးထူးခြားခြားလှုပ်ခတ်လာပြီ။ သူရနိုး၊ ငါရနိုးနဲ့ ရင်ခုန်နေကြပြီ။ဘယ်သူရမလဲဆိုပြီး အချင်းချင်း တီးတိုးတီးတိုး ...........
၂ဝ၁၆ခုနှစ် မြန်မာ့ ရုပ်ရှင် ထူးချွန်ဆုပေးပွဲ အခမ်းအနားသို့ တက်ရောက်ကြမည့် ရုပ်ရှင်သရုပ် ဆောင်၂ဝဦးကို ကျပ်သိန်းပေါင်း ၁ဝဝဝဝ ဖိုးရှိ စိန်ရွှေလက်ဝတ် ရတနာများ၊ .............
မျက်နှာတိုင်းသည် လူသား များအတွက် တန်ဖိုးရှိနေသည်။ လူသားများသည် ကမ္ဘာကြီးအတွက် အကျိုးပြုနေလိမ့်မည်။ အနုပညာရပ် အားလုံးသည် ပြည်သူကို
၆၄ ကြိမ်မြောက်ကျင်းပမယ့် ၂ဝ၁၆ခုနှစ်၊ မြန်မာရုပ်ရှင်ထူးချွန်ဆု ပေးအပ်ချီးမြှင့်ပွဲ အခမ်းအနားကို မတ်လ၁၈ရက်နေ့ ပြည်သူ့ ရင်ပြင်မှာ ကျင်းပပြုလုပ်မှာဖြစ်လို့ ရွှေတိဂုံဘုရားကြီး နောက်ခံပြုကာ ကျင်းပခွင့်ရတာ မို့ မြန်မာ့ရုပ်ရှင်သမိုင်းမှာရော၊…
မတ်လ ၁၈ ရက်နေ့မှာတော့ (၆၄) ကြိမ်မြောက်မြန်မာ့ရုပ်ရှင် အကယ်ဒမီထူးချွန်ဆုပေးပွဲကြီးကို ပြည်သူ့ရင်ပြင်မှာ ကျင်းပတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။အကယ် ဒမီထူးချွန်ဆု ဆိုတာ အနုပညာရှင် တိုင်းအတွက် အမျှော်လင့်ရဆုံးနဲ့ တန်ဖိုးအထား…
မတ်လ ၁၈ရက်၊ ပြည်သူ့ ရင်ပြင်မှာ ကျင်းပမယ့် ၂ဝ၁၆ခုနှစ် အတွက် မြန်မာ့ရုပ်ရှင်ထူးချွန်ဆုပေး ပွဲအခမ်းအနားအတွက် အကယ်ဒမီ ရွှေကြို မောင်၊မယ် ၁၆ဦးစာရင်းကိုထုတ်ပြန်လိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ ရွှေကြို ရွေးချယ်ရေး…
အခုနှစ် (၆၄) ကြိမ်မြောက် မြန်မာ့ရုပ်ရှင်ထူးချွန်ဆုချီးမြှင်ပွဲ ကျင်းပပြုလုပ်မယ့် နေရာကတော့ ပြည်သူ့ ရင်ပြင်မှာ ပြုလုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုကျင်းပခွင့်ရခဲ့တဲ့အတွက် လည်း ဥက္ကဋ္ဌတစ်ဦးအနေနဲ့ ဝမ်းသာ ဂုဏ်ယူနေတဲ့အကယ်ဒမီလူမင်းက ..…
အကယ်ဒမီယွန်းယွန်းက ဒီနှစ် အကယ်ဒမီပေးပွဲကို အနုပညာ ညီအစ်ကိုမောင်နှမတွေကိုအားပေးဖို့အတွက် တက်ရောက်သွားမှာဖြစ်ပြီး အကယ်ဒမီပွဲ တက်ေ ရာက်ဖို့အတွက်လည်း အဝတ်အစားပိုင်းကို ကြိုတင်ပြင်ဆင်နေပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ " ညီမဒီနှစ်အကယ်ဒမီပေးပွဲကို ...
အကယ်ဒမီ စတိတ်စင် စတင် တည်ဆောက်မယ့် ရက်ကိုတော့ မတ် ၈ ရက်နေ့စတင်နိုင်ရန်အတွက် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ ထံတင်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
အသုံးဝင်သော တစ်စုံတစ်ရာကို လိုအပ်သောကြောင့်တည်ဆောက် ခြင်းကို ဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ဂုဏ်သိက္ခာကို လိုအပ်သောကြောင့် အကယ်ဒမီကို တည်ဆောက် ခြင်းဖြစ် သည်။
မကြာခင်ကျင်းပတော့မယ့် ၂ဝ၁၆ အကယ်ဒမီဆုပေးပွဲကိုတော့ ပြည်သူ့ရင်ပြင်မှာ ကျင်းပဖို့ ရာနှုန်းပြည့် သေချာနေပြီဖြစ်ေ ကြာင်း မြန်မာနိုင်ငံ ရုပ်ရှင်အစည်းအရုံး ဥက္ကဋ္ဌ ဦးလူမင်းက ဆိုပါတယ်။
သရုပ်ဆောင် ဝတ်မှုံရွှေရည်က ၂ဝ၁၆ ခုနှစ်အတွက် မြန်မာရုပ်ရှင် ထူးချွန်ဆုပေးပွဲမှာ 'ချစ်လှစွာသော အမုန်း' ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားနဲ့ အမျိုး သမီးဇာတ်ဆောင်ဆုအတွက် အကယ်ဒမီတစ်ကြို ပေး ခံထားရသူပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
"နှစ်တိုင်း နှစ်တိုင်းမှာ လှတဲ့ သူတွေလည်း ရှိတယ်။ ဒါပေမဲ့ လှပြီးတော့ ကျန်ခဲ့တာတွေ လည်း ရှိတာပေါ့။ ဘာဖြစ်လို့လဲ ဆိုတော့ မဆင့်တို့ ဒိုင်တွေက.......
သင့်အနေနဲ့ ၂ဝ၁၇ ခုနစ်အတွက် အော်စကာ ဆုကို ခန့်မှန်းပြီး ဆုရရှိမယ့် အခွင့်အရေးရှိနေပါပြီ။ အခုချိန်မှ စပြီးFeb 26, 2017 5:30 pm အထိ…
သရုပ်ဆောင်ပိုင်ဖြိုးသုက ၂ဝ၁၆ ခုနှစ်အတွက် အကယ်ဒမီဆုပေးပွဲမှာ ဒါရိုက်တာဦးမီးပွား ရိုက်ကူးတဲ့ ဧဒင်ရဲ့နတ်သမီး ရုပ်ရှင်ဇာတ် ကားနဲ့ အမျိုးသမီး ဇာတ်ပို့ဆုအတွက် အကယ်ဒမီတစ်ကြိုပေးခြင်းခံထားရသူ ဖြစ်ပါတယ်။
အကယ်ဒမီဆုပေးပွဲတွေ ပြုလုပ်ခါနီးတိုင်း အကယ်ဒမီအကဲ ဖြတ် ဘုတ်အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးအဖြစ် ပါဝင်ကူညီပေးနေကျ ဒါရိုက်တာ၊ သရုပ်ေ ဆာင် ဦးမောင်မောင်မြင့်ဟာ အကယ်ဒမီ ဘုတ်အဖွဲ့ ထဲမှာ မပါဝင်ဖြစ်ခဲ့တာဆိုရင် ၃နှစ်တိတိရှိခဲ့…
ရုပ်ရှင်ဆိုတာ အနုပညာတွေထဲ မှာ၊ လူထုကြားကိုအထိုး ဖောက်နိုင်ဆုံးနဲ့ လူအများအပေါ် သြဇာသက်ရောက်မှု အရှိဆုံးလို့ ပြောလို့ရ ပါတယ်။
ဇန်နဝါရီလ ၃၁ရက်နေ့ နောက် ဆုံးထားပြီး လျှောက်လွှာ ပြန်လည် တင်ရမယ့် အကယ်ဒမီ ရွှေကြို မောင်၊ မယ် လျှောက်လွှာထုတ်ယူခြင်း ဟာ ဇန်နဝါရီလ နောက်ဆုံးအပတ်သို့…
တက္ကသိုလ်ဂွမ်းပုံက မတ်လထဲမှာ ဒါရိုက်တာမောင်မောင်မြင့်လွင် ရိုက်ကူးမယ့် "ယောက်ျားဆိုလာထား" ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးမှာ ခန့်စည်သူ၊ ရာဇာနေဝင်း၊ ကျော်ကျော်ဗို၊ နေရဲ၊ ဗေလုဝ၊ စိုးမြတ်သူဇာ ....
၂ဝ၁၇ ခုနှစ်၊ မတ်လမှာ ကျင်းပပြုလုပ်တော့မယ့် အကယ်ဒမီဆုပေးပွဲအတွက် ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုအနေနဲ့ အကယ်ဒမီဆု ပေးပွဲမှာ ပြုလုပ်ထည့်သွင်းနေကျ ပုံမှန်အစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ ....
လာမယ့် မတ်လ၁၈ရက်နေ့မှာ ၂ဝ၁၆ခုနှစ် မြန်မာ့ရုပ်ရှင်ထူးချွန်ဆု ချီးမြှင့်ပွဲ အခမ်းအနား ကျင်းပပြုလုပ်တော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ၂ဝ၁၆ခုနှစ် မြန်မာ့ရုပ်ရှင် ထူးချွန်ဆု ချီးမြှင့်ပေးအပ်ပွဲကဆိုရင် ပြည်သူလူထုကနေ ရွေးချယ်တင်မြှောက်ထားတဲ့ အစိုးရသစ်…
၂ဝ၁၆ ခုနှစ် မြန်မာ့ရုပ်ရှင် အကယ်ဒမီထူးချွန်ဆုပေးပွဲအတွက် အကယ်ဒမီစာရင်းဝင် ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားပေါင်း ပြက္ခဒိန်နှစ် အတွင်း ၃၃ ကား ရှိခဲ့ပြီး အကယ်ဒမီ အကဲဖြတ် ....
အခုနှစ် အကယ်ဒမီ ဆုပေးပွဲကြီးကိုတော့ မတ်လအတွင်းမှာ ပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ အနုပညာရှင်တွေအတွက် အကယ်ဒမီပေးပွဲ နီးလာလေလေ အကယ်ဒမီ ရင်ခုန်သံတွေကလည်း မြန်လာလေလေပါပဲ။ အခုနှစ် အတွက် ....
၂ဝ၁၆ ခုနှစ် ပြက္ခဒိန်နှစ်အတွင်းမှာ ပြသသွားခဲ့တဲ့ မြန်မာ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေကို ထူးချွန်ဆုပေးအပ်နိုင်ဖို့အတွက် မြန်မာ့ရုပ်ရှင် အကယ်ဒမီထူးချွန်ဆုပေးပွဲကြီးကို လာမယ့် ၂ဝ၁၇ ခုနှစ် မတ်လ ၁၈ ရက်နေ့မှာ…
အခုအပတ်မှာတော့ ပေါ်ပြူလာပရိသတ်များအတွက် သုံးထပ်ကွမ်း အကယ်ဒမီဆုရှင် ခင်သန်းနုနဲ့ သူမရရှိခဲ့တဲ့ အကယ်ဒမီ ဆုတွေနဲ့ မကြာမီကျင်းပတော့မယ့် အကယ် ဒမီ ဆုပေးပွဲ အကြောင်းတွေ ....
မြန်မာ့ရုပ်ရှင် အကယ်ဒမီ ထူးချွန်ဆုပေးအပ် နိုင်ရေးအတွက် ကြိုတင်စီစဉ်ဆောင် ရွက်မှုများစွာ ပြုလုပ်လျက်ရှိနေရာလက်ရှိမှာတော့ အကယ်ဒမီ ရွှေစင်ရုပ်တုအသစ် ၆ ရုပ်တိတိကို ပီအောထွန်းရင်နဲ့ သားများဆီမှာ အပ်နှံထားလိုက်ပြီ ဖြစ်ကြောင်း
၂ဝ၁၆ ခုနှစ်အတွက် အကယ်ဒမီ ဆုပေးပွဲကြီးလည်း နီးကပ်လို့ လာခဲ့ပါ ပြီ။ ဒီနှစ်အတွက် အကယ် ဒမီ စာရင်းဝင် ဇာတ်ကား ၃၃ ကား ရှိတဲ့အနက်မှ…
ဒီဇင်ဘာလ ၁၄ ရက်နေ့က မြန်မာနိုင်ငံ ရုပ်ရှင်အစည်းအရုံးမှာ ကျင်းပခဲ့တဲ့ အစည်းအဝေးဆုံးဖြတ် ချက်အရ အကယ်ဒမီရွှေကြို ရွေး ချယ်ရေးဆပ်ကော်မတီကို အောက်ဖော်ပြပါ ပုဂ္ဂိုလ်များနဲ့ အစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်အရ ဖွဲ့စည်းတာဝန်ပေးအပ်လိုက်…
၂ဝ၁၆ ခုနှစ်အတွက် မြန်မာ့ရုပ်ရှင် အကယ်ဒမီထူးချွန်ဆုပေးပွဲ ကြီးကို ၂ဝ၁၇ ခုနှစ်မတ်လ ၁၈ ရက်နေ့ (သို့မဟုတ်) ၁၉ရက်နေ့မှာ ကျင်းပပြု လုပ်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ ရုပ်ရှင် ဒု-ဥက္ကဋ္ဌ…
အေးမြတ်သူက မကြာခင်ရုံတင် ပြသတော့မယ့် 'ပရော်ဖက်ဆာ ဒေါက်တာဆိတ်ဖွားနှင့် မြိုင်ရာဇာတာတေ' ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကား ကြီး မှာ ကျော်သူ၊ လူမင်းတုိ့နဲ့အတူ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ်။
၂၀၁၆ခုနှစ်​ အတွက်​ မြန်မာ့ ရုပ်​ရှင်​ထူးချွန်​ဆု ​အကယ်​ဒမီဆု​ပေးပွဲကြီးကို​တော့ လာမယ့်​ ၂၀၁၇ ခုနှစ်​ရဲ့ မတ်​လ ၁၈ (သို့မဟုတ်​) ၁၉ ရက်​​နေ့မှာပုလုပ်​ကျင်းပသွား​တော့မှာ ......
၂ဝ၁၆ ခုနှစ် အကယ်ဒမီ စာရင်းဝင်ဇာတ် ကားတွေကို စိစစ်အကဲဖြတ်နေမှုဟာ လက်ရှိမှာဆိုရင် ဇာတ်ကားပေါင်း၂၈ကားအထိ အကယ်ဒမီဘုတ်အဖွဲ့အနေနဲ့ ကြည့်ရှုစိစစ်ခဲ့ပြီး ပြီဖြစ်ပြီး နောက်ထပ် ရုံတင်ပြသလာဦးမယ့် .............
၂ဝ၁၆ ခုနှစ် ရုပ်ရှင် အကယ်ဒမီထူးချွန်ဆုပေးအပ်နိုင်ရေးအတွက် စိစစ်အကဲဖြတ်ရေးဘုတ်အဖွဲ့ကို ဘာသာရပ်တူတစ်ခုချင်းစီမှာ သက်ဆိုင်ရာဘာသာရပ်က အတတ် ပညာရှင်၊ အနုပညာရှင် ၅ ဦးစီနဲ့ ဖွဲ့စည်းပြီး ........
၂ဝ၁၆ ခုနှစ် အကယ်ဒမီစာရင်းဝင် ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေထဲမှာ နိုင်ငံခြား သား အတတ်ပညာရှင်တွေနဲ့ အနုပညာရှင်တွေ ပါဝင်ရိုက်ကူးထားတဲ့ ရုပ်ရှင် ဇာတ်ကားတွေ ရှိနေသော်လည်း ........
၂၀၁၄-ခုနှစ်အတွက် မြန်မာရုပ်ရှင်ထူးချွန်ဆု ချီးမြှင့်သည့် မှတ်တမ်း ရုပ်ရှင်အသံဆု…
အကယ်ဒမီယခင် ရရှိခဲ့ပြီး ဖြစ်သော ဟာသသရုပ်ဆောင်များဖြစ်ကြတဲ့ ဦးဖိုးပါကြီး၊ဦးမိုးဒီ၊ ဦးမော့စ်တို့နဲ့အတူ ဟာသပညာရှင်များရဲ့ အကယ်ဒမီ မှတ်တမ်းမှာ ဗေလုဝနဲ့ တက္ကသိုလ် ဂွမ်းပုံတို့ကလည်း အကယ်ဒမီမှတ်တမ်းနိုင်ခဲ့ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
အကောင်းဆုံး အမျိုးသား ဇာတ်ဆောင်ဆု ၂၀၁၅ - နေတိုး (နက္ခတ် မှားတဲ့ တိုက်ပွဲ) အကောင်းဆုံး အမျိုးသား ဇာတ်ဆောင်ဆု ၂၀၁၄ - ပြေတီဦး (နှလုံးသားဖြင့် ပြုလုပ်သည်) အကောင်းဆုံး အမျိုးသမီးဇာတ်ဆောင်ဆု ၂၀၁၅…
အကယ်ဒမီ ပွဲတက် အမျိုးသမီးဖက်ရှင်
အကယ်ဒမီ ပွဲတက် အမျိုးသားဖက်ရှင်
အကယ်ဒမီ ပွဲတက် စုံတွဲဖက်ရှင်
ခိုင်သင်းကြည်က လတ်တလောမှာ ရုပ်ရှင် ဇာတ်ကားတွေ ဆက်တိုက် ရိုက်ကူးနေတာ တွေ့ရပါတယ်။ ဆက်တိုက် ရိုက်ဖြစ်နေတဲ့ ရုပ်ရှင် ဇာတ်ကားတွေ ကဟာသ ဇာတ်ကားတွေ ဖြစ်ပြီး စ်ခါတလေမှာလည်း ဇာတ်လမ်းပုံစံ တူတာတွေ ရှိတာကြောင့် ငြင်းရတာတွေလည်း ရှိကြောင်း…
အမျိုးသားဇာတ်ဆောင်ဆု – ပြေတီဦး – နင်စေရင် အမျိုးသမီးဇာတ်ဆောင်ဆု – ၀တ်မှုန်ရွှေရည် – နင်စေရင်…
ယုသန္တာတင် မေဂရေ့ မြူလင်းကိုကို သဉ္ဖာမြင့်မိုရ် ဆောင်းဝတ်ရည် ဝတ်မှုန်ရွှေရည်
မနက်ဖြန် ဒီဇင်ဘာလ ၂၇ ၇က်နေ့တွင် ကျင်းပမည့် ၂၀၁၃ ခုနှစ် အကယ်ဒမီထူးချွန်ဆုပေးပွဲအတွက်...
စုန်းပြူးရုပ်ရှင်ဇာတ်ကား အကယ်ဒမီဆွတ်ခူးရရှိနိုင်ခြေနှင့် အနုပညာရှင်၊အတတ်ပညာရှင်တို့အမြင် ၂ဝ၁၃ခုနှစ်အတွက် မြန်မာ့ရုပ်ရှင်ထူးချွန်ဆုပေးပွဲ ၌ဆန်ခါတင်စာရင်းဝင် ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီး ၆ကားရှိသည့်အထဲက စုန်းပြူးရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားမှ...
အခုအပတ်ဖော်ပြမယ့် ဇာတ်ကား ကတော့ 'စေတန်ရဲ့ ကချေသည်'ရုပ်ရှင်ဇာတ် ကားကို ဖော်ပြပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီဇာတ်ကားကလည်း ဒီနှစ်အကယ်ဒမီအတွက် ပရိသတ်အကြား ရေပန်းစားနေပြီး ရိုမန့်တစ်ဆန်ဆန် ရိုက်ကူးထားတဲ့ အချစ်ဇာတ်ကားတစ်ကားပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဒီနှစ်ကတော့ အကယ်ဒမီ အနေ နဲ့ရွေးချယ်ရ ခက်နေပြီး ဒီလိုရွေး ချယ် ရ ခက်နေခြင်းကလည်း မင်းသား နှစ် ယောက်ရဲ့အားပြိုင်မှု ကကောင်းမွန်နေ တာကြောင့် ပဲဖြစ်ကြောင်း လွင်မိုး က ပြောပါတယ်။
ဒါရိုက်တာဆု – ကိုဇော် ( အရုဏ်ဦး…
မစ္စတာ ဘရိုင်ယန်က စင်ကာပူနိုင်ငံမှာ Creative Director တစ်ဦး အနေနဲ့အသက်မွေးလုပ် ကိုင် နေတာဖြစ်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံ ကို ရောက်ရှိနေတာကတော့ ၁၇ နှစ်နီးပါးအထိ ရှိနေပြီလို့ သိရပါတယ်။
ဒီနှစ်အကယ်ဒမီဆုကို လက်ပံနဲ့ရော၊ တိမ်မင်းသမီးရဲ့ ဒဏ္ဍာရီဇာတ်ကားနဲ့ရောရနိုင်တယ် လုိ့ ပရိသတ်တွေရဲ့အမြင်နဲ့ အတူ အနုပညာရှင်တချို့ရဲ့ သုံး သပ်ပြောကြားမှု အသံတွေ လည်း ကြားနေရပြီး အဲဒီအသံတွေကို ယွန်းယွန်းကိုယ်တိုင်ကော ကြား ဖြစ်လားလို့မေးတော့ . . .
ငယ်ရွယ်ပေမယ့်လည်း ကျရာဇာတ်ရုပ်မှာ အကောင်း ဆုံး ပီပြင်အောင်သရုပ်ဆောင် နိုင်တဲ့ ကလေးသရုပ်ဆောင် အားသစ်က ရုပ်ရှင်ဇာတ် ကားကြီး အနေနဲ့ သူ ပထမဦးဆုံး ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ "အမွေခံထိုက်သူဖြစ်ပါစေ" မိဘမေတ္တာဖွဲ့ . . .
ဒီတစ်ခေါက် ဈေးဝယ်ထွက် တာက အကယ်ဒမီ ပွဲတက် ဝတ်စုံ အတွက် လိုအပ်တာတွေကို သီးသန့် သွားဝယ် ဖြစ်တာလို့ သိရပါတယ်။ လတ်တလောမှာ အကယ်ဒမီ တစ် ပြေးနေတဲ့ နဝရတ် ရဲ့ အကယ်ဒမီ ပွဲ…
စင်ကာပူ နိုင်ငံသား မစ္စတာ ဘရိုင်ယန်က အကယ်ဒမီ စင်မြင့်ထက်၌ စမတ်ကျ လှပသေသပ်သော လျှောက်လှမ်းမှု များဖြင့် အကယ်ဒမီဆုကို ကိုင် ဆောင် နိုင်ရေးအတွက် ဒီဇင်ဘာ ၁၃ ရက် နေ့မှ စတင်၍ မြန်မာနိုင်ငံ…
ဒီဇင်ဘာ ၂၉ ရက်နေ့ သုဝဏ္ဏ အားကစားရုံ တွင် ကျင်းပရန် လျာထား သည့် မြန်မာ့ရုပ်ရှင် ထူးချွန် ဆုပေးပွဲကြီးနှင့် ပတ်သက်ပြီး ရုပ်ရှင်လော ကသား များ၏ အကြံပြု စကား များနှင့် အကယ်ဒမီ…
ပရိသတ်တွေ လွမ်းဆွတ်သတိ ရနေကြတဲ့ အကယ်ဒမီ စိုးသူကို အကယ် ဒမီပေးပွဲနေ့က မေးမြန်း ထားပြီး နောက်ပိုင်းမှာ မိခင်ဖြစ်သူ ဆေးကုသမှု ခံယူနေတဲ့ ဆာကူရာ ဆေးရုံကြီးမှာ အနီးကပ် ပြုစုစောင့်ရှောက် နေတဲ့ အကယ်ဒမီ စိုးသူနဲ့…
မနှစ်ကတည်း ကသက်မွန် တို့ ချင်းဝတ်စုံ ဝတ်လာက တည်း က နောက် နှစ် ကျွန်တော် ရှမ်းလိုဝတ်မယ် လို့ တွေး ထားတာပါ။ ဖိတ်စာထဲမှာ လည်း...
ဇာတ်ကားဆု – ထာဝရအလင်းတန်းများ – ရီမြင့်ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ရေး ဒါရိုက်တာဆု – ထွန်းအောင်ဇော် – ထာဝရအလင်းတန်းများ အမျိုးသားဇာတ်ဆောင်ဆု – နောင်နောင် – ထာဝရအလင်းတန်းများ…
ဟာသဇာတ်ကားရိုက်ထားတဲ့ အတွက် ဒါရိုက်တာအနေနဲ့ မျှော်လင့်ချက် ထဲမှာ မရှိပါဘူး . . . (ဒါရိုက်တာအဏ်ထော်ဏီ) ဒီနှစ်ကတော့ တကယ်ရသင့်တဲ့သူတွေ အားလုံးကို ရစေချင်တယ် . . . (ဂျင်းနီ)
ယခုနှစ် အကယ်ဒမီ စာရင်းဝင် ဇာတ်ကား ၁၅ကားနဲ့ ပတ်သက်ပြီး စာနယ် ဇင်း ဆရာကြီးဦးဝင်းငြိမ်းရဲ့ သုံးသပ်ချက်၊ ခန့်မှန်းပေးမှုတို့နဲ့ အတူရုပ်ရှင် ဇာတ်ကားတွေကို အမြဲမပြတ် ကြည့်ရှု့လေ့ရှိတဲ့ စာနယ်ဇင်းဆရာ ကိုကိုလှမြင့်ရဲ့အကယ်ဒမီ ခန့်မှန်းလေ့လာသုံးသပ်မှု တို့ကို ဖော်ပြပေး…
ကျရာဇာတ်ရုပ်ကို ပီပြင်စွာသရုပ် ဆောင်နိုင်ပြီး ဒရာမာဇာတ်ကားသာမက ဟာသဇာတ်ကားတွေမှာလည်း ပရိသတ်တွေ ရဲ့ အားပေးမှုကို သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တဲ့ ရန်အောင် ကို . . .
အကယ်ဒမီ ထူးချွန် ဆုပေးပွဲကို ၂ဝ၁၁ ခုနှစ်နဲ့ ၂ဝ၁၂ ခုနှစ် နှစ်နှစ်ပေါင်း ပြုလုပ်မယ်လို့ လတ်တလောထွက်ပေါ်နေတဲ့ သတင်းများနဲ့ပတ်သက်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံရုပ်ရှင် အစည်းအရုံး ဒုတိယ ဥက္ကဋ္ဌဦးလူမင်းက . . .
ဖူးစုံ၊ စံမဒီ၊ စွဲညှို့ရှင်၊ သဒ္ဒါထက်၊ ၀ါဆိုမိုးဦး၊ ခေမီကို၊ ဂျူးဂျူးကေ၊ စမိုင်းလ်၊ စုလှိုင်နှင်း၊ သိဂီင်္ထွန်း၊ ၀ါဝါအောင်၊ အိဖြိုးချယ်ရီ
ဇာတ်ကားဆု – အာဒမ်ရယ် ဧ၀ရယ် ဒဿ ရယ် ( Heart N Soul ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ရေး ) ဒါရိုက်တာဆု…
“၂၀၁၀ ခုနှစ်အတွက် မြန်မာ့ရုပ်ရှင် ထူးချွန်ဆု ရရှိခဲ့သူများအား မြန်မာနိုင်ငံ ရုပ်ရှင် အစည်းအရုံးက ထပ်ဆင့်ဂုဏ်ပြု”
၂၀၁၀ ခုနှစ်အတွက် မြန်မာ့ရုပ်ရှင် ထူးချွန် ဆုရရှိခဲ့သူများကို မြန်မာနိုင်ငံရုပ်ရှင် အစည်း အရုံးက ထပ်ဆင့်ဂုဏ်ပြုညစာ စားပွဲကို မတ်လ ၃ ရက်၊ ည ၇နာရီက . . .
ဇာတ်ကားဆု – ကြိုးကြာတောင်ပံခတ်သံ ( ဆေးရောင်စုံ ) ( စင်ရော်ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ရေး ) ဒါရိုက်တာဆု –…